September 20, 2021 - Khitalin Media
တစ်ယောက်သောသူကို ရင့်နင့်အောင် ချစ်ခဲ့ဖူးသူတွေသာ နားလည်မယ့် ခံစားချက်များ
September 20, 2021 by Khitalin Media
ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်နဲ့ရင်းပြီး ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်ဆိုတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်း မတိုက်ဆိုင် တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ် အဆုံးသတ်က မလှခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်နင့်အောင် ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေဆီမှာ ဒီလိုခံစားချက်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ နာက်င္မႈေတြ အချစ်ဆိုတာ ပိုချစ်တဲ့သူက ရှုံးရတယ်ဆိုသလိုပဲ ပိုချစ်မိတဲ့သူက ပိုနာကျင်တတ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ အဆုံးသတ်က ကိုယ့်အတွက် နာကျင်ဖို့ပဲ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ နာကျင်မှုတွေက လွယ်လွယ် အသားမကျနိုင်သလို ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားအောင် ခံစားရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အချစ်အတွက် ရူးမိုက်ဖူးတယ် ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ ရူးရူးမူးမူးကို ချစ်ဖူးကြပြီး လူတွေဟာ အချစ်အတွက် ရူးမိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေတောင် လုပ် … Read more
သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူ အကြောင်း
သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူ အကြောင်း သင်ဟာ1 ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင် သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ် တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတျောက်လိုပါပဲ2ရက်နေ့မွေးသူ ဖြစ်ရင် သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲ ဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတျောက်ဖြစ် တယ်။သင့်အတွက်ဆို မမေ့နိုင်တဲ့ပျော် ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတျောက်ပါပဲ။3ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင် သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန် ပါလုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေ နပ်ပြီးအမှားလုပ် မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ဝန်မ လေး သူတျောက်ဖြစ် တယ်။သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တျောက်ပါပဲ ။4ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… … Read more
အမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့မညီတာတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့အမှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရာမှာ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ရှေ့နေဖြစ်သူတွေကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတချို့ကို ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကြားနာစစ်ဆေးရာမှာ သူနဲ့ ရှေ့နေဖြစ် သူတွေ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာပါ။ တရားခွင်ကြားနာမှုအခြေအနေ ရန်ကုန်က ပေးပို့တဲ့သတင်း နန်းလောင်ဝ်က ပြောပြပါမယ်။ အမှုပေါင်း ၁၁ မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေထဲက အမှု ၃ မှုနဲ့ ဦးဝင်းမြင့်အမှု ၁ မှု၊ ပေါင်း ၄ မှုကို နေပြည်တော်က သီးသန့်တရားရုံးမှာ ဒီကနေ ကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်။ ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတော့ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းတယ်လို့ ရှေနေဦးခင်မောင်ဇော်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တော့ အမှုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိစ္စ ညှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ အမှုကို strategically … Read more
Zawgyi ပိုင်တံခွန်ကို ထောင် ၇ နှစ်ချလိုက်တာနဲ့ပက်သက်ပြီး ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုင်တံခွန်အစ်မ ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသားပိုင်တံခွန်ကို ထောင် (၇) နှစ်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ရှိလာတာကို အားလုံးလည်းသိကြမှာပါနော်။ ဒီသတင်းကပရိသတ်တွေကြား အတော်လေးကိုဂယက်ရိုက်ခဲ့ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာပါနော်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မကတော့ဒီသတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ပါပြီ နော်။”မိသားစုဝင်တွေတင်တာ ကလွဲရင်ဘာကိုမှမယုံကြပါနဲ့ဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာဆိုဘာမှမတင်ကြပါနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်။တစ်ခုခုဆို ဒီအကောင့်ကနေ ကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါ။ မိသားစု ဝင်တွေ အတည်ပြုပေးမှသာသတင်းတွေကို ယုံစေချင်ပါတယ်၊share စေချင်ပါတယ်ဗျာတောင်းဆိုပါတယ်။ လျှောက် ပြော၊ လျှောက်မဖြန့်ကြပါနဲ့” လို့ တောင်းဆိုရေးသားထားတာပါနော်။ ထောင် အတွင်းမှာ နေထိုင်နေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လည်းဖြန့်ဝေနေကြတာကို မြင်တွေ့နေရပြီး အခုလို လုပ်ရက်တွေမပြုလုပ်ကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်နော်။” ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာပုံပဲရရ မတင်ပါနဲ့မိသားစုကိုအရင်လာမေးပါ လာပြပါ တင်ထားသမျှတွေလည်း ဖျက်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်။ … Read more
အူဝဲနဲ့တွေ့ဖို့သွားတဲ့ ပြေတီဦးရဲ့ထောင်ထဲကရယ်ရခက် ငိုရခက် အဖြစ်အပျ က်လေးကို ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို နှစ်အတော်ကြာ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျေ ာ်ဇင်တို့ကတော့ ခုချိန်မှာ (၅၀၅ – က) နဲ့ ဖမ် းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီကနေ့အထိ တစ် ရက်လေးမှ မမေ့ဘဲ သတိရလွမ်းဆွတ်ေ ကြာင်းတွေ ဖော်ပြပေးကြသလို အမြန်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုလည်း ဆုတော င်းပေ းနေကြပါတယ် ။ အခုလည်း သူတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ ထေ ာင်ထဲမှာဆုံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြေ တီဦးတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ငိုရခက် ရ ယ်ရခက် အဖြစ်လေးကို အမှတ်တရ ရေးသ ားဖော်ပြလာပါတယ် ။ စာလေးဖတ် ပြီး ရယ်နေရတာ အမှန်ပါပဲ ။ ဒါ့အပြင် အူ ဝဲတို့ … Read more
တော် လှန်ရေးနောက်တစ်ဆင့်တက်မည်ဟု NUGကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆို
ပည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့ရွာပေါင်းများစွားရှိလာပြီး တော် လှန်ရေးနောက်တစ်ဆင့်တက်မည်ဟု NUGကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆို ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ20 မြေပြင်အခြေအနေမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ စိုးမိုးထားတဲ့ ရွာပေါင်းများစွာရှိလာနေပြီး မကြာခင်မှာဘဲ တော်လှန်ရေးအဆင့် နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်မယ်လို့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ မှာ ရေးသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ မြို့ပြနဲ့လမ်းမတန်းတွေလက်မလွှတ်ရအောင်အနိုင်နိုင်ထိန်းနေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုထား ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ရရက်နေ့က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဲ့ အရေးပေါ်အခြေ အနေကြေညာပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံး ရရာ လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပြီးနောက် အာဏာသိမ်းစစ် ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) တွေအကြား ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာဘဲ တော်လှန်ရေးနောက်ထပ်အဆင့်တွေ ထပ်မံလာလိမ့်မယ်လို့ ဦးရည်မွန်ကဆိုထားပါသေးတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့လည်း ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်း တိုင်း၊ မကွေးတိုင်းအတွင်းကကျေးရွာတွေကို စစ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးမီးရှို့တာ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို PDFလို့စွပ်စွဲဖမ်းဆီးတာတွေ၊ … Read more
သားတစ်ယောက်ရှိနေပေမဲ့ ရထားဘူတာရုံနားမှာ ၁၂နာရီအကြာ နေ့တိုင်းသွားထိုင်ပြီး တောင်းရမ်းနေခဲ့ရတဲ့ အဖွား
Shanxi ပြည်နယ်၊ Duyuan မြို့မီးရထားဘူတာရုံရဲ့ မြေအောက်စင်္ကြံမှာ ရဲများက ကင်းလှည့်နေစဉ် မကြာသေးမီက အမျိုးသားတစ်ဦး ဟာ လမ်းလျှောက်ရန် ခက်ခဲတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖွားတစ်ဦးကို အိမ်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဖွားဟာ မျက်စိနှစ်ဘက်လုံးလည်း မမြင်ရပါဘူး ။ အဖွားက နေ့တိုင်းအဲ့ဒီ‌နေရာမှာ ထိုင်ပြီး အစာတောင်းခံနေခဲ့တာပါ ။ ညနေပိုင်း၂-၃ နာရီလောက်မှ သူမက အိမ်ပြန်ပြီး အဲဒီနောက်အရာရှိတွေလာရောက်စစ်ဆေးရာမှ ထိုအဖွားဟာ သားတစ် ယောက်ရှိကြောင်း သိရသည်အထိ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ။ သားဖြစ်သူက ” ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်မရှိတာကြောင့် ငါ့အမေနဲ့ငါကိုယ်တိုင် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့က အရမ်းခက်တယ်။ ကျွန်တော်အမေ့ကို မကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အတွက် တောင်းပန်တယ် ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဖွားဟာ နေ့တိုင်း စစ်တုရင်ကစား သွားမယ်လို့ အနီးနားကရွာသားတွေကို … Read more
ယောကျ်ားလေးများ အမြတ်တနိုးယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂) မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေး လိုစိတ် ရှိပြီး ကိုယ့်ထက် အကြီး များအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံ တတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ် များအား အရာရာ နားလည် ထိန်းကျောင်းပေး တတ်သော မိန်းမ (၃) ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မ ဝင်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစား ဖြစ်သော မိန်းမ (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ် ကိုင်တတ်သော မိန်းမ ထို အသိဉာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင် များကိုလဲ … Read more
ယောကျ်ားလေးတွေလက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ယောင်္ကျားလေးတွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေးဆိုတာ လောကကြီးမှာရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေး တွေရော၊ မိန်းကလေးတွေကိုရော ဖတ်စေချင်ပါတယ်နော် ။ (1) ဉာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဉာဏ်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဉာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှု မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆို တာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ ။ ေယာက်္ားေလးေတြလက္မလႊတ္နိုင္တဲ့ မိန္းကေလးဆိုတာ (2) ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို ကြိုးပမ်းနေချိန်၊ သူကကိုယ့်ကို အမြဲအားပေးနေတယ်။ အားပေးတာ တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာကိုပါ သင်ပြပေးသူပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းကအတော် ဆုံးပဲလို့ … Read more
သင့်ဖူးစာရှင် ဘယ်သူလည်း သိချင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်ပါ မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုကြိုတင်တွေ့ဖူးချင်ကြတာဟာ လူတိုင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလား ဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။ ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ပြုတ်ပေးရမယ် တဲ့။ ပြီးတဲ့ အခါ ကျက်သွားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို တဝက်စီကိုက်စားလိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထည့်ထားပြီး မအိပ်ခင် မှာ နှင်းဆီရနံ့ရေမွှေး ကိုဆွတ်ပီးမှအိပ်ပါတဲ့။ စမ်းလုပ် ကြည့်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ဆန်စေ့(၇)စေ့ကိုခေါင်းအုံး အောက်မှာထားပြီး ဖူးစာရှင်ကို မြင်မက်အောင် သေချာဆုတောင်းပြီးအိပ်တာပါ။ ပြီးတော့ Kiss me quick ပန်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့နည်း လည်းရှိပါသေးတယ်။မနက်ကတည်းက အဲ့ဒီပန်းတွေကို ပန်းကန်ပြား လေးပေါ်မှာ ထည့်ထားပြီး စင်ပေါ်တင်ထားပါ။ညဘက် အိပ်ခါနီးကျမှ ခေါင်းအုံးအောက်ကိုထည့်ပြီး … Read more